Ubuntu Chukumisa i-OTA-14 iza nophuculo olukhulu kwikhamera yayo | Ubunlog
Ubuntu Bamba i-OTA-14 ifika kunye nophuculo olubalulekileyo kwikhamera yayo kwaye ngoku iyasivumela ukuba sithathe ii-captures
Ixesha elide, bendifuna ukuzama Ubuntu Bokubamba, kwaye eyona ndlela yokwenza, ndicinga ukuba yayikukuthenga iPineTab. ndiyifumene, Sele ndizamile Ubuntu Touch kwaye ndiqinisekisile ukuba inezibane zayo kunye nezithunzi. Kodwa xa ndathenga i-PINE64 ithebhulethi kwaye ndadibanisa amaqela abo eengxoxo, yayihlekisa ukubona indlela ekufuneka sithathe ngayo iifoto ukuze sikwazi ukuthumela okwenzekayo. Oku akusayi kubakho mfuneko emva kokumiliselwa kwe I-OTA-14 ukusuka Ubuntu Ukuthinta.
Ndicinga ukuba kukho into engekho ngaphandle kobabalo. Kwezi veki zidlulileyo, mhlawumbi ngaphezulu kwenyanga, bandixelele ukuba sele beyilungisile Isikripthi esinokusivumela ukuba sithathe izikrini zesikrini kwizixhobo ezinamaqhosha evolumu angahlulwanga, njengePineTab, apho bekungenakwenzeka ukusebenzisa indlela yemveli. Ukwenza oku, iskripthi songeze "iqhosha" elitsha elibonakalayo xa sicofa iqhosha lokucima umzuzwana omnye, kwaye ngelo qhosha singathatha iifoto zesikrini. Yintoni endiyifumanisayo ehlekisayo? Awunakho ukwenza umfanekiso-skrini kwimenyu ukuthatha umfanekiso-skrini, ukuze ufumane umfanekiso ongezantsi kwale migca kuye kwafuneka ndisebenzise inkqubo endala: ifoto.
Njengoko sifunda kwi Inqaku lokukhupha, eyona ibalaseleyo ye-OTA-14, ogama lakhe lingahambelani kwizixhobo ze-PINE64, zezi zilandelayo:
Ikwafumaneka kwiXiaomi Redmi 4X, Huawei Nexus 6P, Sony Xperia Z4 (tablet).
Bajolise kwinkxaso ye-Android 9, ngokuyinxalenye ukunceda iVolla Ifowuni.
Imicimbi ehleliweyo ivala ii -apps ngokusilayisha.
Inkxaso yekhamera ephuculweyo, kodwa yona ayisebenzi kwiPineTab.
Inkxaso yokujonga iliso langaphandle ngoku isebenza kunye neHardwareComposer2.
Utshintsho lwenziwe kunxibelelwano nakwimiyalezo yeapps ukwenza ukuba kube lula ukuyisebenzisa.
Isikrini sokufaka sokuqhuba kwangaphandle sihambelana nesitayile somfanekiso wezinye iiapps.
Wongeze iqhosha lokuthatha iifoto-skrini kwiqhosha lamandla. Oku kuvumela ukuthimba ngaphandle kwebhodibhodi, kunye kuthi nakwabo banezixhobo ezinamaqhosha evolumu angenakucinezelwa ngaxeshanye, njengePinePhone kunye nePineTab.
Ukucinywa kweBluetooth okungagungqiyo, okunokwenzeka kwiimeko ezahlukeneyo, njengaxa uqhagamshela isixhobo kwinkqubo yomsindo wemoto.
Ubuntu Bamba i-OTA-14 sele ikhutshiwe kwisitishi esizinzileyo, ke ukuyifaka kufuneka sivule i-app yoqwalaselo kuphela, yiya kwicandelo lokuhlaziya kwaye ufake uhlobo olutsha esele lusilindile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Ifowuni yeBuntu » Ubuntu Bamba i-OTA-14 ifika kunye nophuculo olubalulekileyo kwikhamera yayo kwaye ngoku iyasivumela ukuba sithathe ii-captures
I-IceWM 1.9 iza nophuculo lokukhangela, ukulungisa ingxaki kunye nokunye